वित्तीय साक्षरता – Page 20 – Banking Khabar
कमोडिटी मार्केट के हो ? कसरी गर्ने लगानी ?
सेयर बजार व्यापारमा ब्रोकरहरूजस्ता मूल्य प्रणालीको संलग्नता बिना सिधा एक्सचेञ्जमार्फत व्यापार गर्न अपनाइएको प्रणाली ओटीसी बजार हो । यसमार्फत हुने व्यापारलाई छोटकरीमा ओटीसी अर्थात् ओभर दी काउन्टर भनिन्छ । सामान्यतयाः नेप्सेमा सूचीकरण हुन नसकेका, सूचीकरणबाट हटाइएका तथा सूचीकरणका लागि आवश्यक …
वित्तीय साक्षरतामा धितोपत्र बजार : जान्नैपर्ने शव्दाबलीहरु
धितोपत्र बजारमा प्रवेश गरेकाहरु सबैले धितोपत्र बजारबारे सम्पूर्ण कुराहरु जानेका हुन्छन् भन्ने हैन । कतिपय मानिसहरु साथीभाईको लहलहैमा लागेर पनि शेयर कारोबारमा हात हाल्छन् । तर, बजारसम्बन्धि सामान्य कुराहरु नबुझ्दा आफूलाई निकै पछाडि परेको महशूस गर्छन् । त्यस्तै, कतिपय मानिसहरु …
अग्राधिकार शेयरबारे सम्पूर्ण जानकारी
कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गर्ने गरी जारी गरिएको शेयरलाई अग्राधिकार शेयर भनिन्छ । कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश सम्बन्धमा साधारण शेयरवालाको भन्दा अग्र अधिकार हुने हुनाले नै यसलाई अग्राधिकार शेयर भनिएको हो । यस्तै कम्पनी खारेजीमा जाने …
साधारण शेयरसम्बन्धि नालीबेली
कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट अग्राधिकार शेयरवालाहरुलाई तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गरिसकेपछि बाँकी रहने रकमबाट लाभांश वितरण गरिने गरी जारी गरिएको धितोपत्रलाई साधारण शेयर भनिन्छ । साधारण शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो लगानीको मात्रानुसार सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ र उनीहरुलाई कम्पनीको स्वामी (इधलभच) मानिन्छ । …
बैंकहरुले आफ्नो भौतिक शाखा बिना बैंककै कर्मचारीहरुलाई एजेण्टको रुपमा प्रयोग गरी दुर्गम तथा गाउँगाउँमा दिने बैंकिङ सेवा नै शाखारहित बैंकिङ सेवा हो । यस्तो बैंकिङ सेवा सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा बढी सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्य बैंकिङ …
वित्तिय साक्षरतामा रोजगार बचतपत्र : कसरी प्रयोग गर्ने (विवरणसहित)
बैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सलाई मुलुकको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यस्वरुप सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्ने गरेको छ । यसैबिच नेपाल सरकारको तर्पmबाट राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागद्वारा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०७७“क” निष्कासन गरिँदै छ । २५ करोड रुपैँयाको यो …
यसकारण फरक छन् बैँकिङ र ईबैँकिङ
परम्परागत बैँकिङ र ईबैँकिङ दुबैमा फाइदा र बेफाइदा तथा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन् । उपभोक्ताले यी दुबै प्रकारका अथवा यीमध्ये एक सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् । परम्परागत बैँकिङ र ईबैँकिङबीचको फरक निम्नानुसार छन् । परम्परागत बैँकिङ परम्परागत बैँकिङमा, एक …
वित्तिय साक्षरतामा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात केन्द्रीय बैंक : काम, कर्तव्य र अधिकार
‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ बर्गका बैंकबारे जानकारी, कसरी दिन्छन् सेवा ? (विवरणसहित)
वित्तिय साक्षरतामा विमा : विमा र निर्जीवन बीमा के हो ?
आर सी पोख्रेल बीमा भौतिक तथा मानवीय क्षतिको क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्ने एक किसिमको सम्झौता हो । बीमा गरिसकेपछि पहिलो पक्ष अर्थात् बीमित व्यक्तिले आफ्नो वस्तु वा दायित्वको कुनै जोखिमहरूका विरूद्ध आर्थिक सुरक्षाको निम्ति पूर्वघोषित सानो रकम बुझाए वापत दोस्रो पक्ष …